ရာသီဥတုအပြောင်းအလဲနဲ့ ခေါင်းကိုက်ခြင်း | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
ခေါင်းအလွန်​အကျွံကိုက်​တာက ဘယ်​​လောက်​ထိခံရခက်​သလဲဆိုတာ ကြုံဖူးသူ​တွေပဲသိတာပါ။ ဘယ်​အချိန်​​ခေါင်းထကိုက်​မလဲမသိဘဲ တစ်​ထိတ်​ထိတ်​ဖြစ်​​နေတာကလည်း ဆိုးတယ်​​နော်​။
တကယ်​လို့ ရာသီဥတုအ​ပြောင်းအလဲမှာ ​ခေါင်းကိုက်​တတ်​တာသတိထားမိတယ်​ဆိုရင်​ ​လေထုဖိအား​ကြောင့်​ကိုက်​​နေတာဖြစ်​နိုင်​တယ်​။
ဦး​ခေါင်းခွံတွင်းဂလိုင်​​ပေါက်​​တွေထဲမှာ ​လေ​တွေနဲ့ပြည့်​​နေတာမို့ ​လေထုဖိအားသက်​​ရောက်​မှုအ​ပြောင်းအလဲမှာ ​ခေါင်း​ကိုက်တ​တ်​တယ်​။
​လေထုဖိအားကျသွားတဲ့အချိန်​မှာ ​ကိုက်​တတ်​ပြီး ရိုးရိုး​ခေါင်းကိုက်​သလိုပါပဲ။ ဒါ့အပြင်​
• နားထင်​တစ်​ဖက်​ ဒါမှမဟုတ်​ ၂ဖက်​လုံးနာ​နေတာ ​တွေနဲ့တွဲတတ်​တယ်​။
အထူးသဖြင့်​ မိုးရွာချိန်​၊ ​လေထုစိုထိုင်းဆများချိန်​မှာ ပိုဖြစ်​နိုင်​တယ်​။
ပြင်​ပ​လေထုဖိအားကျဆင်းလာတဲ့အခါ အပြင်​ဘက်​ဖိအားနဲ့ အတွင်းဖိအားကွာခြားချက်​များလာလို့ နာလာတတ်​တာပါ။ ​​လေယျာဉ်​​ပေါ်မှာလည်း ဖြစ်​တတ်​တယ်​​နော်​။ ​လေယာဉ်​တက်​သွားချိန်​မှာ နားထဲက​နေ ​ဖောက်​ခနဲဖြစ်​သွားတာ၊ နာတာမျိုး ဖြစ်​တတ်​တယ်​။
ဒီလို​ခေါင်းကိုက်​ဖို့အတွက်​ ​လေထုဖိအားအများကြီး​ပြောင်းလဲစရာလည်း မလိုပါဘူး။ ​လေ့လာမှုတစ်​ခုအရဆိုရင်​ ဖိအား​လေးနည်းနည်း​ပြောင်းရုံနဲ့တင်​ ​ခေါင်းတစ်​ခြမ်းကိုက်​​ဝေဒနာ​ပေါ်လာတတ်​တာကို ​တွေ့ရတယ်​​နော်​။
တ​ကယ်​လို့​ ခေါင်းကိုက်​တာက ကိုယ့်​ရဲ့လူ​နေမှုဘဝကိုပါ ထိခိုက်​လာတယ်​ဆိုရင်​​တော့ ဆရာဝန်​နဲ့ ပြသင့်​ပြီ​နော်​။
ရာသီဥတုအ​ပြောင်းအလဲနဲ့ ​ခေါင်းကိုက်​တာကို ဆက်​စပ်​မှုရှိမရှိ မှတ်​ထားဖို့လည်းလိုပါမယ်​။
• ဘာ​ကြောင့်​ပိုဆိုးလဲ? ပိုသက်​သာလဲ?
ဆရာဝန်​နဲ့မပြခင်​ကတည်းက ဒီလိုစာရင်းဇယားလုပ်​ထားသင့်​တယ်​​နော်​။ ဆရာဝန်​နဲ့ပြတဲ့အခါ အရင်​က​ရောဂါရာဇဝင်​၊ မိသားစုထဲ နာတာရှည်​​ခေါင်းကိုက်​​ရောဂါခံစား​နေရတာရှိမရှိ​တွေကို​ ​မေးမြန်းပါလိမ့်​မယ်​။ ​ခေါင်းကိုက်​​စေတဲ့အ​ကြောင်းရင်း ဆိုးဆိုးရွားရွား​တွေ ရှိရင်လည်း ပြောပြရပါမယ်။ ဆရာဝန်က လိုအပ်သလို အောက်ပါ စစ်ဆေးမှုတွေကို ပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
• ခါးဆစ်​ရိုးအရည်​စသဖြင့်​ စစ်​​ဆေးဖို့ လိုအပ်တာတွေကို စမ်းသပ်ပေးပါလိမ့်မယ်။
အဓိကက ​ကိုယ့်​ရဲ့​ခေါင်းကိုက်​တတ်​တဲ့ပုံစံကို ကိုယ်​သိထားရမယ်​။ ဒါမှကြိုတင်​ကာကွယ်​နိုင်​မှ​ပေါ့။
တကယ်​လို့​ခေါင်းကိုက်​ရင်​​သောက်​ဖို့​ဆေး​တွေ​ပေးထားတယ်​ဆိုရင်​ ​နား​တွေအူလာတာ၊ မျက်​လုံးထဲအ​ရောင်​​တွေမြင်​လာတာ၊ ပျို့ချင်​အန်​ချင်​လာတာစသဖြင့်​ ​ခေါင်းကိုက်​​တော့မယ့်​လက္ခဏာ​တွေပြတာနဲ့ ​ဆေး​သောက်​လိုက်​ပါ။
• တစ်​ညကို၇နာရီက​နေ ၈နာရီ​လောက်​အိပ်​တာ
• ကျန်းမာ​ရေးနဲ့ညီညွတ်​​အောင်​စားပြီး အဆာမခံတာ
• စိတ်​ဖိစီးမှုများ​နေရင်​ စိတ်​​ပြေ​လျော့တဲ့​လေ့ကျင့်​ခန်း​တွေလုပ်​တာ စသဖြင့်​ ​နေ့စဉ်​​နေထိုင်​မှုကိုလည်း​ပြောင်းလဲ​ပေးကြည့်​ပါ။
ရာသီဥတုကို ကိုယ်​မပိုင်​​​ပေမယ့်​ ကိုယ့်​​ခေါင်းကိုက်​ပုံကို ကိုယ်​သိပြီး ​သေချာ​စောင့်​ကြည့်​မယ်​ဆိုရင်​ ​ခေါင်းကိုက်​တာကို ​ကောင်း​ကောင်းထိန်းနိုင်​မှာပါ။
ခေါငျးအလှနျအကြှံကိုကျတာက ဘယျလောကျထိခံရခကျသလဲဆိုတာ ကွုံဖူးသူတှပေဲသိတာပါ။ ဘယျအခြိနျခေါငျးထကိုကျမလဲမသိဘဲ တဈထိတျထိတျဖွဈနတောကလညျး ဆိုးတယျနျော။
တကယျလို့ ရာသီဥတုအပွောငျးအလဲမှာ ခေါငျးကိုကျတတျတာသတိထားမိတယျဆိုရငျ လထေုဖိအားကွောငျ့ကိုကျနတောဖွဈနိုငျတယျ။
ဦးခေါငျးခှံတှငျးဂလိုငျပေါကျတှထေဲမှာ လတှေနေဲ့ပွညျ့နတောမို့ လထေုဖိအားသကျရောကျမှုအပွောငျးအလဲမှာ ခေါငျးကိုကျတတျတယျ။
လထေုဖိအားကသြှားတဲ့အခြိနျမှာ ကိုကျတတျပွီး ရိုးရိုးခေါငျးကိုကျသလိုပါပဲ။ ဒါ့အပွငျ
• နားထငျတဈဖကျ ဒါမှမဟုတျ ၂ဖကျလုံးနာနတော တှနေဲ့တှဲတတျတယျ။
အထူးသဖွငျ့ မိုးရှာခြိနျ၊ လထေုစိုထိုငျးဆမြားခြိနျမှာ ပိုဖွဈနိုငျတယျ။
ပွငျပလထေုဖိအားကဆြငျးလာတဲ့အခါ အပွငျဘကျဖိအားနဲ့ အတှငျးဖိအားကှာခွားခကျြမြားလာလို့ နာလာတတျတာပါ။ လယြောဉျပျေါမှာလညျး ဖွဈတတျတယျနျော။ လယောဉျတကျသှားခြိနျမှာ နားထဲကနေ ဖောကျခနဲဖွဈသှားတာ၊ နာတာမြိုး ဖွဈတတျတယျ။
ဒီလိုခေါငျးကိုကျဖို့အတှကျ လထေုဖိအားအမြားကွီးပွောငျးလဲစရာလညျး မလိုပါဘူး။ လလေ့ာမှုတဈခုအရဆိုရငျ ဖိအားလေးနညျးနညျးပွောငျးရုံနဲ့တငျ ခေါငျးတဈခွမျးကိုကျဝဒေနာပျေါလာတတျတာကို တှရေ့တယျနျော။
တကယျလို့ ခေါငျးကိုကျတာက ကိုယျ့ရဲ့လူနမှေုဘဝကိုပါ ထိခိုကျလာတယျဆိုရငျတော့ ဆရာဝနျနဲ့ ပွသငျ့ပွီနျော။
ရာသီဥတုအပွောငျးအလဲနဲ့ ခေါငျးကိုကျတာကို ဆကျစပျမှုရှိမရှိ မှတျထားဖို့လညျးလိုပါမယျ။
• ဘာကွောငျ့ပိုဆိုးလဲ? ပိုသကျသာလဲ?
ဆရာဝနျနဲ့မပွခငျကတညျးက ဒီလိုစာရငျးဇယားလုပျထားသငျ့တယျနျော။ ဆရာဝနျနဲ့ပွတဲ့အခါ အရငျကရောဂါရာဇဝငျ၊ မိသားစုထဲ နာတာရှညျခေါငျးကိုကျရောဂါခံစားနရေတာရှိမရှိတှကေို မေးမွနျးပါလိမျ့မယျ။ ခေါငျးကိုကျစတေဲ့အကွောငျးရငျး ဆိုးဆိုးရှားရှားတှေ ရှိရငျလညျး ပွောပွရပါမယျ။ ဆရာဝနျက လိုအပျသလို အောကျပါ စဈဆေးမှုတှကေို ပွုလုပျပေးမှာဖွဈပါတယျ။
• ခါးဆဈရိုးအရညျစသဖွငျ့ စဈဆေးဖို့ လိုအပျတာတှကေို စမျးသပျပေးပါလိမျ့မယျ။
အဓိကက ကိုယျ့ရဲ့ခေါငျးကိုကျတတျတဲ့ပုံစံကို ကိုယျသိထားရမယျ။ ဒါမှကွိုတငျကာကှယျနိုငျမှပေါ့။
တကယျလို့ခေါငျးကိုကျရငျသောကျဖို့ဆေးတှပေေးထားတယျဆိုရငျ နားတှအေူလာတာ၊ မကျြလုံးထဲအရောငျတှမွေငျလာတာ၊ ပြို့ခငျြအနျခငျြလာတာစသဖွငျ့ ခေါငျးကိုကျတော့မယျ့လက်ခဏာတှပွေတာနဲ့ ဆေးသောကျလိုကျပါ။
• တဈညကို၇နာရီကနေ ၈နာရီလောကျအိပျတာ
• ကနျြးမာရေးနဲ့ညီညှတျအောငျစားပွီး အဆာမခံတာ
• စိတျဖိစီးမှုမြားနရေငျ စိတျပွလြေော့တဲ့လကေ့ငျြ့ခနျးတှလေုပျတာ စသဖွငျ့ နစေ့ဉျနထေိုငျမှုကိုလညျးပွောငျးလဲပေးကွညျ့ပါ။
ရာသီဥတုကို ကိုယျမပိုငျပမေယျ့ ကိုယျ့ခေါငျးကိုကျပုံကို ကိုယျသိပွီး သခြောစောငျ့ကွညျ့မယျဆိုရငျ ခေါငျးကိုကျတာကို ကောငျးကောငျးထိနျးနိုငျမှာပါ။